musha OCEANIA FOOTBALL STORI Mark Viduka Utano Hwokudzidza Plus Untold Biography Facts
LB inopa Nyaya Yese yebhokisi yebhokisi inonyatsozivikanwa neNickname; 'V-Bomber'. Our Mark Viduka Childhood Story pamwe Untold Biography Facts inounza iwe zvizere nhoroondo yezviitiko zvinoshamisa kubvira paudiki hwake kusvikira zuva. Kuongorora kunosanganisira nhau yehupenyu hwake musati mazivikanwa, hupenyu hwemhuri uye dzakawanda OFF uye ON-Pitch zvishoma zvakazivikanwa pamusoro pake. Iye zvino kunze kwekuwedzera kwaunoda, rega Tanga.
Mark Viduka Utano Hwokudzidza Plus Untold Biography Facts-Upenyu Hwekutanga
Mark Anthony Viduka akazvarwa musi waOctober 9, 1975 kuMelbourne, Victoria, Australia naJoe Viduka (baba) naRose Viduka (amai). Iye anobva kuCroatia Heritage uye ane midzi yakasimba kunyika yake yakabva. Pasinei nehukama hwakasimba naye munyika yepamba (nhasi maCroatia), vabereki vake vakavimbisa kuti Mark akagara uye akakura muMelbourne, Australia.
Joseph naAna Rose vakanga vatiza kubva kumakominist Yugoslavia munguva yekutanga ye1960 vasati vasangana uye vachiroorwa muAustralia. Uyu aimbova webhola (Joe Viduka) akadzoka zvakare kuti atsvake huroto hwake hwezvematongerwe enyika. Baba vaMark vakanga vari muchengeti wemutambo uyo aiva nesimba rezvematongerwo enyika muYugoslavia hurumende. Nokudaro, kutama uye kuvaka mhuri muAustralia kwaireva kuvasunungura kubva mukuvhima kwevezvematongerwo enyika. Akazodzokera kuYugoslavia.
Mark Viduka mwanakomana wake akaberekerwa kuAustralia gore rakatevera mushure meYugoslavia hurumende yakatanga kuparadzana kwavo. Dzimwe nguva, baba vake vaifamba-famba kwete kwete kungoona mwanakomana wavo muAustralia, asi kuti vamudzidzise antics anodiwa mumutambo. Semwana, muduku Mark aizomirira Baba vake kudzoka kubva kuCroatia. Paakadzoka, akamboita mutambo nemwanakomana wake. Sekidiki mukomana ane mafuta, ainyara uye haana kutaura zvakawanda, asi akateerera. Baba vake vakamuudza bits uye zvidimbu pamusoro penyika yake chaiyo, Croatia.
Mark Viduka akakurira achigara uye achidzidza bhora kubva kuna baba vake. Akada kusvika kune zvinangwa zvake zvekuzadzisa kurota kwababa vake. Pane imwe nguva, aifanira kurwisana pakati pekusarudza kwekutamba kuAustralia kana kuCroatia.
Mark Viduka Utano Hwokudzidza Plus Untold Biography Facts-Croatia kana Team Australia
The ChiCroatian War of rusununguko kubva kuYugoslavia yakarwa kubva ku1991 kusvika ku1995. Mark Viduka, wechidiki akanga ari pamusoro pemutambo wake munguva iyi. Mushure mehondo, nyika itsva yakanga isingagoni kumira pamakumbo ayo. Vanhu vachiri kuitanidza neYugoslavia. Mutungamiri wavo mutsva aida kuti zita reCroatia rive rakasiyana ndokutaura kuti raigona kuburikidza nebhola. Ichi chaiva kutanga kwekuvhima kwakanyanya kwevaduku vemauto vari kumusha uye kune dzimwe nyika.
Nemafaro, nhoroondo dzose dzakasvika patafura yemutungamiriri wenyika dzaireva zita rimwe- 'Mark Viduka'. Mutungamiri mutsva akaudzwa kuti Marc Viduka akanga akanaka sei, aiziva nezvechiCroatia uye aida kuti auye kuzobatsira nyika itsva kuti ione kurota kwavo.
"Iwe uchava chiratidzo kune vose veCroatia," akaudza Marko, "Iwe uri mumwe wevanhu vedu chaivo vatinotarisira kuti vachadzoka kuzovaka zvakare nyika yedu."
Chii chingave chidiki? Kunyange zvazvo vakakurira muSt Albans, kunze kweMelbourne, Croatia yaiva muropa raViduka. , asi Croatia yaiva nyika yavo. Mutauro wekutanga waMark waiva chiCroatia nokuti ndizvo zvaive zvakataurwa nevabereki vake mumba mavo, uye Anna Rose akabika zvokudya zveCroatia chete muAustralia.
Nhamo, Mark anosarudza imba yake yechipiri, Australia. Pakati pe 1993 - 1995, akaita chimiro che 20 nekuda kwavo pasi pe 20 uye akawana 37 zvinangwa. Croatia yakaramba iine vatambi vaida kuti vaite. Ukama hwake bedzi newaimbova yekwawo nyika kwaiva kuiswa muCroatia Soccer Association yeAustralia Hall of Fame
Mark Viduka Utano Hwokudzidza Plus Untold Biography Facts-Nzira Yakadzikama uye Yokuzvininipisa
Viduka anoda nzvimbo yakanyarara. Kuva nerugare rwepfungwa uye unhu hwakanyarara nguva dzose kunoonekwa sechikamu chinokosha chehupenyu hwake.
Zuva roga roga raanogona kubva pakubvisa mari, Mark Viduka anotora Tara, rottweiler wake, achifamba pamakomo akapoteredza imba yake yeAustralia. Anonyatsotaurwa kusvikira zuva.
Mark Viduka Utano Hwokudzidza Plus Untold Biography Facts-Upenyu hweMhuri
Mumazuva ekutanga 1970s amai vake, Rose, chiKukraine-Croat akasimuka, akasangana nababa vake Joe, dhiyabhorosi yemuRussia, kuMelbourne. Baba vake Joe vaibva kuCroatia, kubva kwaakaenda kuAustralia muZ1960s. Baba vake iye zvino vari vapenyu apo amai vake, Rose Viduka vakafa July 2014. Mark Viduka ndiye mukoma mukuru waDiane Viduka akazvarwa musi waApril 27, 1983 muMelbourne, Victoria, Australia.
Ndiye mutambikadzi, anozivikanwa nekutsvaga Alibrandi (2000), Offspring (2010) uye vavakidzani (1985).
Mark Viduka Utano Hwokudzidza Plus Untold Biography Facts-Ukama Hupenyu
Iye akaroorwa naIvana Husidic (musikana wake wenguva refu) muchato chakavanzika akaronga mu2002 achiri muLeeds United. Viduka sarudza Dubrovnik, guta rekare muSouth Corotia kuitira nzvimbo yemuchato. Akaroora kune aichimbova muCroatia Model.
Vose vane vanakomana vatatu pamwe chete: Joseph (akaberekwa November 2002), Lucas (akazvarwa muna September 2006) uye Oliver (akaberekwa May 2008).
Mark Viduka Utano Hwokudzidza Plus Untold Biography Facts-Unhu Hwake
Izvi ndizvo izvo Mark Viduka akataura nezvomunhu wake - "Kwenguva yakawanda yemabasa angu ndakave nerombo rakanyanya kuti ndadzivirire kukuvara kukuru. Upenyu hwangu hwose hukuru hwangu hwaiva yebhola, yebhola, yebhola. Ndakanga ndakanyatsongwarira pane izvo uye apo vana vangu vakazvarwa vakatsvaga zvishoma nezvishoma. Ndakanga ndine chimwe chinhu muupenyu hwangu chakachinja maonero angu. Iwe unowana chimwe chinhu chinonyanya kukosha kudarika kukunda, kurasikirwa kana kutora. Handifariri chaizvo kuva nemanzwiro. Kuratidzwa kwepakati pekunzwa, handiiti izvozvi zvinhu. Handizivi nei. Ndinoda kuva mufananidzo usinganetseki nezvazvo. Ini ndiri Libra saka ndinofanira kuenzanisa zvinhu. Kutungamira nyika yangu kunze kweNyika yeNyika kwaiva chinhu chandisingazokanganwi.
Mark Viduka Utano Hwokudzidza Plus Untold Biography Facts-Career in Summary
Viduka akapararira kusvika kuchiitiko age 18 uye akatungamirirwa, achikunda dhota yegoridhe uye medaliti yaJohnny Warren mumakore maviri akarurama asati ashanyira kuDinamo Zagreb.
Akawana chikwata chenyika yeAustralia paZimbabwe World Cup muZimbabwe.
Mark Anthony Viduka ndiye aimbova mutambi wechikwata weAustralia uyo akatamba sechepiti mberi. Akawana chikwata chenyika yeAustralia paZimbabwe Cup 2006 FIFA muGermany kusvika kune 16 yekupedzisira. Anobata zvinyorwa zvezvinangwa zvakawanda zvakaitwa neAustralia mumusorosoro weEFA Champions League nevana.
Mark Viduka Utano Hwokudzidza Plus Untold Biography Facts-Harry Kewell naTim Cahil Partnership
Ndivo vane 3 best Australian footballer naViduka kuisa runyora. Mark Viduka na Harry Kewell akaita nhepfenyuro dzepasi pose sevanorwisa vashandi veLeeds United uye pane zvishoma zvichinyatsovaparadzanisa.
Nzira dzavo dzepamusoro dzaive dzakasiyana, uye Viduka achizviitira zita pamba asati asvika kuEurope, asi Kewell akasiya achiri muduku achitsvaga chibvumirano chepurogiramu.
Mark Viduka Utano Hwokudzidza Plus Untold Biography Facts-Pakati peFIFA 15 Australian Ultimate Team Legends
Ndivo vatambi vakakurumbira veAustralia munhau yebhokisi yenyika. Dzimwe nguva zvakaoma kutaura zvakanakisisa pakati pevatatu. FIFA 15 zvikamu zvinoratidza mazamu akadaro. Harry Kewell rinotonga pano.
Mark Viduka Utano Hwokudzidza Plus Untold Biography Facts-A Rwiyo
Viduka aiva nerwiyo rwakanyorwa pamusoro pake neChirungu muimbi / munyori wenziyo uye Middlesbrough fan Alistair Griffin (uyo akanyorawo akanyora rwiyo rwebhora rakanyorwa naTerry Venables). Rwiyo rwiyo runyoro rwakanyorerwa kumutambo waLeonard Cohen we "Hallelujah". Middlesbrough meneja Gareth Southgate akagamuchira mutinhiro senzira yekusimudza mari yekusarudzwa kwake kwakasarudzwa, Macmillan Cancer Support. Leonard Cohen akapa mvumo yokuti rwiyo rwacho rubudiswe sechipo chekuda kutevedzera. Viduka ave ari nhengo yeMelbourne City FC kubvira panguva yakatanga.
Mark Viduka Utano Hwokudzidza Plus Untold Biography Facts-ACousin kuna Luke Modric
Viduka, aimbova Leeds United player ndiye munun'una wekuMidrid midfield yemupurisa Ruka Modric. Kunyange zvakadaro, unogona kushamisika kuti izvi zvakabatana sei, tichifunga kuti Viduka ndiAustralia asi iyo nyaya yacho ndeyokuti mutambi wacho anobva kuCroatia akatanga uye mhuri yake yakanga yatamira kuAustralia mune 60's.
Viduka akaitamba semuzinda wakatarisana uye akachengetedza Australia muZimbabwe Cup Cup iyo yakaitirwa muGermany. Modric, kune rumwe rutivi, rwakanga rusati rwuri mutungamiri marudzi asi nyore nyore mumwe wevanhu vakanakisisa pakati pezera rake. Pakati pevaviri, Modric zvirokwazvo ndiye mutambi ari nani, zvisinei, panguva imwe chete Viduka ndomumwe wevakuru vese veAustralia.
Mark Viduka Utano Hwokudzidza Plus Untold Biography Facts-Anovenga Kuparidzirwa
Kubva 2009, nyanzvi yekare yeChirungu Premier League neSocceroos kapiteni yakadzivisa kuonekwa. Haashoma kutaura pamusoro peA-League kana Socceroos. Haana kumbovhiringidza kuzivisa kubvisa kwake kubva kumutambo. Anotsigira kuti kutora kwake kwose kwakasara kusingazivikanwi. Zvose zvaanoda ndeye mudzimai wake nevana.
Mark Viduka Utano Hwokudzidza Plus Untold Biography Facts-Kudzidzisa vana vake
Sezvakaitwa nababa vake, ikozvino Viduka ari kudzidzisa vana vake pa Knights.
"Unoziva, Melbourne ndiyo imba yangu," vakadaro mushure mekunge vapinza muCroatia Soccer Association yeAustralia Hall of Fame. "Ndakagara upenyu hwangu hukuru hwevanhu vakuru kubva kumba kwangu uye pose pandinodzoka ndinongopindira."
Yakagadziridzwa zuva: Gunyana 30, 2019